Biyo la’aan ka jirta degmada Buur-Hakaba – Radio Muqdisho
Wasiiradan ka tirsan maamulka Koonfur galbeed oo kormeerka ay ugu kuurgalayeen xaaladda nolaleed dadka ku nool degmada Buur-Hakaba ayaa waxaa hogaaminaayay Wasiirka Arrimaha gudaha iyo dowladaha Hoose waxaana kamid ahaa Wasiirka Maalliyadda ee maamulka Koonfur galbeed iyo xubno kale oo ka socday hay’adaha gargaarka.
Degmada Buur-Habaka ayaa hadda waxaa ka jirta biyo la’aan bahsan oo saaneysay nolashada dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanadaasu, waxaana mas’uuliyiintan intii ay ku sugnaayeen degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay ay kormeereen Waro biyoodyo dadka reer Buur-Hakaba ay ka cabi jireen biyaha isla markaana hadda qalalan oo aan biyo ku jirin.
Mas’uuliyiinta isugu jira Wasiiro iyo saraakiisha hay’adaha gargaarka ayaa waxaa ay sidoo kale soo indha indheeyeen Ceelasha biyaha ee degmadaasi, waxaana halkaasi ay kula kulmeen dadweynaha biyaha ka dhaansanaya Ceelashaasi oo hadda ay gabaabsi yihiin biyaha ku jira isla markaana waqti dheer ku qaadato in qofka biyo ka dhaansado.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee gobolka Baay Siraaji Sheekh Isxaaq oo la socda mas’uuliyiinta kormeereysay degmaeda Buur-Hakaba ayaa soo sheegaya in dadka ku nool Buur-Hakaba ay hadda haysato biyo la’aan.
“12 saac ka badan ayaa halkan joogay ilaa iyo hadda wax biyo ah kama helin Ceelkan, dadka oo dhan ayaa sidoo ah dhinaato weyn ayaa ka jirta degmada Buur-Hakaba halkii Fuusto oo biya ah waxaa ay joogtaa 60,000 oo Shilin Soomaaliya ah” waxaa sidaasi sheegay mid kamid ah Haweenka Buur-Hakaba.
Odayaasha ku nool degmada Buur-Hakaba ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in biyo la’aan ay haysato isla markaana maamulka Koonfur galbeed ee Soomaaliya ay ka codsanayaan in biyo dhaamin loo sameeyay dadka ku dhaqan deegaanadan.
Kulan mas’uuliyiinta maamulka Koonfur galbeed ay la yeesheen maamulka degmada Buur-Hakaba iyo qaar kamid ah waxgaradka ayaa waxaa ay u balan qaadeen in maamulka Koonfur galbeed uu wax ka qaban doono dhibaatada Biyo la’aaneed ee ka jirta degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay.